IVA 0.4T ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မ်ာဒယ်- IVA 0.4T
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA0.4T
IVA0.4T 400Kg Industrial tube ice making machine (100% New) is the best tube ice making machine in Vietnam market in particular and Southeast Asia in general.
IVA 0.4T ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရော အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်မှာပါ အကောင်းဆုံး ရေခဲထုတ်စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
IVA0.4T 400KG TUBE ICE MAKING MACHINE (100% NEW)
IVA 0.4T ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)
Viet An General Trading Joint Stock Company is one of the leading companies in supplying industrial tube ice making machines in the market currently. It was established under the business license No. 013039593 by Hanoi Department of Planning and Investment on August 4, 2009, registered for the third change. Viet An is honored to be the 19th enterprise out of 100 leading Vietnamese brands.
Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီက ယနေ့ခေတ် ရေခဲထုတ်စက်တွေ ပေးပို့တဲ့ ဈေးကွက်မှာ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို တတိယအကြိမ် လဲထားသော ဟနွိုင်း စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဋ္ဌာနမှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပေးအပ်ထားသည့် လိုင်စဉ်အမှတ် ၀၁၃၀၃၉၅၉၃ နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Viet An သည် ထိပ်တန်း ကုန်တံဆိပ် ၁၀၀ အနက် ၁၉ ခုမြောက် လုပ်ငန်းအဖြစ် ချီးမြောက်ခံထားရပါတယ်။
ရေခဲထုတ်စက်အသေးမှစပြီး စက်ရုံသုံးအထိ ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့ https://vietan.vn/may-lam-da-vien တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
Currently, in response to the growing demand for ice due to hot weather, numerous ice making machine facilities, including poor quality ones, have appeared. In such circumstances, Viet An's Industrial tube ice making machine will beaperfect choice to protect the consumers from poor products that do not meet food hygiene and safety standards. With diverse capacity, ranging from 0.4T to 100T, we can meet various demands of the customers.
ယခုအခါမှာ ပူအိုက်သော ရာသီဥတုအခြေအနေအရ ရေခဲသုံးစွဲသူတွေ များပြားလာပါတယ်။ အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေအပါအဝင် အများကြီး ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အခြေအနေတွေအတွက် ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ အာမခံချက်မရှိ၊ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ မပြည့်မီတဲ့ စက်တွေကို မတွေ့ရဖို့ Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်က အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ 0.4T မှ 100T အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အများကြီး ရှိတဲ့အတွက် ဝယ်ယူသူတွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။
IVA0.4T 400Kg Industrial tube ice making machine is widely chosen by the customers thanks to its convenience, savings and safety. To know more details, read this article.
IVA 0.4T ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)က အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေ လုံခြုံစိတ်ချရတာကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ အများဆုံးရွေးချယ်မှုကို ခံရပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိဖို့ အောက်က ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပေးပါ။
IVA0.4T 400Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New)
All VA’s tube ice making machines with the capacity ranging from 0.4T to 100T are produced with the advanced technology currently to bring the customers with the best products at the most competitive price. We are committed to genuine products, meeting ISO 9001:2015 standards. The machine applies below technology:
0.4T မှ 100T ထိ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမတူညီတဲ့ VA ရဲ့ စက်မျိုးစုံကို ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာနဲု့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါမှ ဝယ်ယူသူတွေက အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို ဈေးသက်သာစွာ ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက စစ်မှန်ပြီး ISO 9001:2015 နဲ့ ကိုက်ညီကြောင်း ကတိပေးပါတယ်။ ဒီစက်မှာ အောက်ပါနည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
The compressor is considered as the heart of the IVA0.4T 400Kg Industrial Tube Ice Making Machine in particular and the industrial tube ice making machines in general. Currently, in the market, there are no manufacturers using new compressors for producing ice making machines except for Viet An. This is an outstanding point of VA’s products. It also helps to increase the product shelf life and minimize the errors incurring.
ဖိအားသိပ်စက်ကို စက်ရုံသုံး အသေးစိတ်နဲ့ ယေဘုယျ IVA 0.4T ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ အသက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယခုအခါ ဈေးကွက်မှာ Viet An မှ လွဲပြီး ရေခဲထုတ်စက်တွင် ဖိအားသိပ်စက်ကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်တာ မရှိပါဘူး။ ဒါက Viet An ပစ္စည်းတွေရဲ့ ထူးချွန်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ပစ္စည်းရဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့ သက်တမ်းကို ရှည်စေပြီး အပျက်အစီးလည်း နည်းစေပါတယ်။
The compressors are all produced in the foreign countries under strict quality control. It is manufactured in an absolutely automatic CNC system with automatic cutting, pressing and molding processes. After that, it is transferred to the high pressure testing machine - the best high pressure testing machine imported from German.
ဖိအားသိပ်စက်တွေအားလုံးကို နိုင်ငံခြားမှာ တင်းကြပ်တဲ့ ကွာလတီထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်တို ဖြတ်တောက်၊ ဖိသိပ်၊ ပုံစံသွင်းပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သော အော်တို CNC စနစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ဂျာမန်မှ တင်ပို့ထားသော အကောင်းဆုံး ဖိအားစမ်းသပ်စက်ဆီကို ရွှေ့ပါတယ်။
The use of the new compressor is to control the cooling capacity and energy consumed to help you save energy and increase the shelf life of the products. In addition, the machine is also capable of stable performance, causing less noise.
ဖိအားသိပ်စက်အသစ်ကို အသုံးပြုခြင်းက အေးသော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အင်နာဂျီစားခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး အာနာဂျီိကို ချွေတာခြင်းနဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့ သက်တမ်း ကြာရှည်ခြင်းကို ကူညီဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စက်က လုပ်ဆောင်မှုတည်ငြိမ်ပြီး ဆူညံမှု နည်းပါတယ်။
ဖိအားသိပ်စက်က ရေခဲထုတ်စက်စနစ် တစ်ခုလုံးမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ၄င်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုက ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်လို့ပါ။ ဒါက ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဖိအားသိပ်စက်အသစ်ကို အသုံးပြုသင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။
Liquid and gas separation technology specifically applied to Viet An’s 400kg Industrial Tube ice making machine
Viet An ရဲ့ ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်တွင် အဓိက အသုံးပြုသော အရည်နှင့် အငွေ့ ခွဲထုတ်ခြင်း
အရည်နှင့် အငွေ့ ခွဲထုတ်ခြင်းစနစ်
The liquid and gas separation system is an improvement of Viet An. It applies the most advanced technology in 2019 and is only available in Viet An. Thanks to this technology, the ice making machine process is improved to be much faster and haveamore compact and modern designed duct system. The liquid and gas separation system helps to separate and transfer the liquid to the liquid duct and the gas to the gas duct, preventing the machine from being affected by the liquid. Thus, the compressor can operate smoothly and has long shelf life.
အရည်နဲ့ အငွေ့ ခွဲထုတ်ခြင်းစနစ်က Viet An ရဲ့တိုးတက်မှု တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာအသုံးပြုထားပြီး Viet An မှာပဲ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကြောင့် ရေခဲထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က ပိုမြန်ပြီး ပိုပြီးသိပ်သည်းကာ ခေတ်မီသော ဒီဇိုင်းရှိတဲ့ ပြွန်စနစ်လည်း ပါရှိပါတယ်။ အရည်အငွေ့ ခွဲထုတ်ခြင်းစနစ်က အရည်တွေကို အရည်ပြွန်ဆီသို့၊ အငွေ့တွေကို အငွေ့ပြွန်ဆီသို့ ခွဲထုတ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်အောင် ကူညီပေးပြီး စက်ကို အရည်ကြောင့် ထိခိုက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖိအားသိပ်စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး ထားသိုနိုင်တဲ့ သက်တမ်းကြာရှည်ပါတယ်။
Completely Built Up Stainless Steel Pump
အပြည့်တည်ဆောက်ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစုပ်စက်
The pump system used in Viet An’s tube ice making machine is made from stainless steel. It isaCBU (Completely Built Up) product imported by Viet An. Unlike other tube ice making machines in the market which use cast iron pumps, Viet An is the only enterprise to apply stainless steel pumps for its 400Kg tube ice making machines to ensure the durability of the products.
Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုထားသော ရေစုပ်စက်ကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ အခြားရေစုပ်စက်တွေက သံကြွပ်တွေကို အသုံးပြုထားပေမယ့် Viet An ကတော့ ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားသော ရေစုပ်စက်ကို အသုံးပြုတဲ့ တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပစ္စည်းရဲ့ ကြာရှည်ခံမှုကို သေချာစေပါတယ်။
Condenser (CBU, 100% New)
အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေတဲ့ ကိရိယာ(CBU, ၁၀၀% အသစ်)
ဒီအရာကလည်း ရေခဲထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ အငွေ့မှ အရည်သို့ ပြောင်းလဲပေးတဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ထုံးကျောက်အကြွင်းအကျန်တွေကို တစ်လမှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် အပူပြောင်းလဲခြင်းကို ကန့်သတ်လိုက်ပါလ်ိမ့်မယ်။
အေးသော တာဝါ တင်ပို့ခြင်း
အေးသောတာဝါက ရေစီးဆင်းမှု အပူချိန်ကို လျှော့ချဖို့ အသုံးပြုတဲ့ စပါယ်ရှယ် စက်ကိရိယာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ရေခဲစက်ထဲမှာ ရေရဲ့ အပူချိန်ကို လျှော့ချပြီး အပူချိန်ကို ပတ်ဝန်းကျင်ကို စွန့်ထုတ်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ အေးသောတာဝါရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သိရှိဖို့ ရေနွေးငွေ့ရဲ့ အရှိန်နဲ့ ရေစီးဆင်းမှု အပူချိန်က ၃၀-၃၈ ဒီဂရီကြား ရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်က အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ် ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်က လုံးဝ အော်တိုဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စနစ်က လုံးဝ အော်တိုထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ပြသနာပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ စနစ်က အော်တိုရပ်သွားပြီး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ကွာဟ ညှိနှိုင်းပေးပါတယ်။ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ၃ ဆင့် ပါဝါ- ၃၈၀ ဗို့ကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ပုံးဓာတ်အားဖြည့် မော်တာ- ဓားအတွဲ
ပုံးဓာတ်အားဖြည့် မော်တာ- ဓားအတွဲက ၁၀၀% အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An ရဲ့ အထူးသီးသန့်ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ ပုံများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တန်ဖိုးကို ဖန်တီးဖို့ သုတေသန ပြုလုပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့က ရေခဲစက်မှာ အသုံးပြုမယ့် သီးသန့် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဒီဇိုင်းဆင်ထားရပါတယ်။
ကွာလတီမြင့်သော ရပ်တန့် အဆို့
INox IVA ရေခဲထုတ်စက်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် ရပ်တန့်အဆို့ပုံများ
အပေါ်က ပြောခဲ့တာတွေက Viet An ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုပြီး လျင်မြန်စေကာ အဆင်ပြေစေပြီး အကုန်အကျအတွက်လည်း ထိရောက်ပါတယ်။ ဒီသီးသန့်အစိတ်အပိုင်းတွေကို Viet An မှာပဲ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ အများကြီးရွေးချယ်မှုကို ခံရပါတယ်။
IVA0.4T 400Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offers an amazing capacity of energy saving. Let's imagineanew and an old ice making machine with the same capacity, then;
IVA 0.4T ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) က အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ အင်နာဂျီချွေတာနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုတူညီတဲ့ အသစ်နဲ့ အဟောင်းရေခဲထုတ်စက်ကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။
Filtration capacity (m3/24h) ရေစစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း 20
Dimension အတိုင်းအတာ 200*700
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 0.37
Electricity supply (V) လျှပ်စစ်အားပေးပို့မှု 220V-50hz
Weight (Kg) အလေးချိန် 19
Price (USD) ဈေးနှုန်း
Viet An commits to bring the customers with the best industrial ice making machines
Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေဆီကို အကောင်းဆုံး စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်တွေ ယူဆောင်လာပေးမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။
Above are outstanding benefits of Viet An's IVA0.4T 400Kg Industrial tube ice making machine in particular and Viet An’s ice making machines in general. Our industrial ice making machines have higher prices compared to other machines of the same capacity in the market because they are % new. With these new machines, you can remarkably save energy and reduce production time.
အပေါ်က ဖော်ပြချက်တွေက Viet An IVA 0.4T ရေခဲထုတ်စက် အသေးစိတ်နဲ့ Viet An ရဲ့ ယေဘုယျ ရေခဲထုတ်စက်တွေရဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်တွေက ၁၀၀% အသစ်ဖြစ်တာကြောင့် ဈေးကွက်က အခြားစက်တွေထက် ဈေးပိုကြီးပါတယ်။ ဒီ စက်အသစ်တွေနဲ့ သင်က အင်နာဂျီကို ချွေတာနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
We apply the most advanced and exclusive technology to our ice making machines. The new compressor applies the most advanced technology to save more energy compared to the old one. The liquid and gas separation system helps to reduce the length of the duct system and the operation time. The pump system (100% new) is made of 304 stainless steel with the exclusive technology. IVA0.4T 400Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offers an amazing capacity of energy saving.
With this industrial ice making machine, the capital recovering period will be shorter while with the old ones, it will takearemarkable operation and maintenance cost but the quality is not assured. Viet An hopes that you will carefully consider to beasmart consumer.
ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဖိအားသိပ်စက်အသစ်မှာ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် စက်အဟောင်းထက် အင်နာဂျီကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ အရည်နဲ့ အငွေ့ကို ခွဲပေးသောစက်က ပြွန်စနစ်ရဲ့ အလျားနဲ့ လည်ပတ်မှုအချိန်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ရေစုပ်စက်(၁၀၀%အသစ်)ကို အထူးနည်းပညာနဲ့အတူ စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ IVA 0.4 T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)က အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ အင်နာဂျီချွေတာမှုကို ပေးပါတယ်။ ဒီစက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်နဲ့ဆိုရင် အရင်းပြန်ရနိုင်တဲ့ အချိန်က တိုတောင်းပါတယ်။ စက်အဟောင်းနဲ့ဆိုရင် ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နည်းပေမယ့် ကွာလတီကိုတော့ အာမမခံပါဘူး။ Viet An မှ သင်က စမတ်ကျတဲ့ ဝယ်ယူသူဖြစ်ဖို့ သေချာရွေးချယ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
When buying this IVA0.4T 400Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system for free.
IVA 0.4T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ထုတ်ပိုးမှုစနစ်ကို အလကား ပေးဆောင်ပါတယ်။
Contact us now to get the IVA0.4T 400Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New). We commit to bring the customers with the best products, ensuring food hygiene and safety standards. Your trust is the greatest joy for us. It is our honor to accompany you through the way!
IVA 0.4T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို ရရှိဖို့ အခုပဲ ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေဆီကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းများ ယူဆောင်လာပေးမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။ သင်ရဲ့ ယုံကြည်မှုက ကျွန်တော်တို့အတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ပျော်ရွှင်မှုပါပဲ။ ဒါက သင်နဲ့အတူ ပူးပေါင်းဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပါပဲ။
ရေခဲထုတ်စက်နှင့် ထုတ်ပိုးမှုအတွဲရဲ့ ဈေးနှုန်း
Capacity (kg/24h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
Machine dimension (L*W*H mm) စက်၏အတိုင်းအတာ
Tube ice dimension (L*W*H mm) ရေခဲ၏အတိုင်းအတာ
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
Current (A) မျက်မှောက်
Packaging system ထုတ်ပိုးမှုစနစ်
VA0320 Water filtration system
VA 0320 ရေစစ်ထုတ်စနစ်
Filtration capacity (m3/24h) ရေစစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း
Electricity supply (V) လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု
Weight (Kg) အလေးချိန်
Hỏi đáp & đánh giá ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)